Valencia inowana mota nyowani dzemagetsi kune ayo ngarava | Green Renewables
Valencia inowana mota nyowani dzemagetsi kune ayo ngarava
ChiGerman Portillo | | Autogas, Motokari dzemagetsi
Magetsi emagetsi chombo chakanaka chekudzora kusvibiswa mumaguta anoona nezvekufambisa. Saka, 18 itsva magetsi emagetsi akawedzerwa kuzvikepe yekutakura muValencia.
Iwe unoda kuziva zvakanakira mota yemagetsi uye kuti vawedzera sei mumakore achangopfuura?
1 Mota nyowani dzemagetsi muValencia
2 Zvimwe hunyanzvi nekusimudzira
Mota nyowani dzemagetsi muValencia
Kanzura weInternal Water Cycle, Vicent Sarrià, CEO weGlobal Omnium, Dionisio García Comín, uye mukuru mukuru weIVACE, Julia Company, vatora chikamu pakuratidzira kwemota nyowani dzezvisikwa idzo kambani ichashandisa muguta re Valencia.
Aya ndiwo mamodheru matsva e 100% mota dzemagetsi iyo inopa kuenderera uye kuremekedza nharaunda iyo yedu mhepo inoda.
Kune vakawanda vanofa pagore izvo kusvibiswa kwemweya kunotora mumaguta nekuda kwemugwagwa traffic nemaindasitiri. Iyo yemagetsi mota shanduko iri kutanga zvishoma nezvishoma, asi inofambira mberi kubva pakuiswa kwayo mumaguta kwakaoma.
Iwo mamodheru akave akaverengerwa muValencia ari Renault Kangoo ZE uye Zoe uye kuzvitonga kwavo 240 uye 400 makiromita, zvakateerana.
Zvekushanda chaiko uye kurerukirwa kwekushandisa kweidzi mota, makumi maviri neshanu ekuchajisa nzvimbo akaiswa pakati peVara de Quart nemakambani Emivasa neGlobal Omnium. Izvi zvinoratidza kuti ngarava dzemotokari dzemagetsi dzinogona kuwedzera zvakanyanya uye nekuwedzera mumakore anotevera.
Izvo zvinodikanwa kuti uwedzere huwandu hwemotokari dzemagetsi kana tichida kudzora kusvibisa mweya. Hutano hwevose huri mumaoko edu, kunyange riri basa rakaoma uye rine chinzvimbo.
Shanduko yemamiriro ekunze, sekuziva kwedu, ichokwadi icho chinotibata isu tese kubva pasirese kusvika kune yemuno. Naizvozvo, Global Omnium inotarisira kugovera mukugadzirisa kwemamiriro ezvinhu aya angakanganisa kunzira yedu yehupenyu uye zviwanikwa zvemvura.
Dionisio García akasimbisa zvinotevera:
"Isu takagara tichiratidza kuva kambani inobatana nevemagariro uye, zvingave zvisina kudaro, isu ticharamba tichipa mhinduro dzinobatsira mukugara kwavo uye kushandiswa kwemota dzezvakatipoteredza ndomumwe wavo".
Nekuda kwekudzora kukanganiswa kwehutachiona uye shanduko yemamiriro ekunze, kuwanikwa kweidzi mota mukutenderera kuchaderedza kuburitswa kwe anopfuura matani makumi matatu e CO30 mumhepo, kuve imwe yemagasi ayo anonyanya kubatsira mukudziya kwepasi.
Iyi sarudzo inokonzerwa nehurongwa hwehukambani hune chinangwa chekudzora zvishoma nezvishoma dhiziri nemota dzepeturu nezvimwe zvakaomarara zvinobatsira mukuchengetedza nharaunda.
Zvimwe hunyanzvi nekusimudzira
Global Omnium iri kusanganisa iyo nyowani tekinoroji kune mhando yemota yezvisikwa iyo isingaderedze mashandiro asi izvo zvinobatsira mukuchengetedza nharaunda munharaunda yakazvimiririra yeValencia.
Kusvikira zvino, 33 mota dzezvakatipoteredza dzakabatanidzwa (13 LPG nemakumi maviri emagetsi), iri kurongwa kuisa imwe gumi nemashanu rinotevera (20 LPG, 15 magetsi uye 4 mahybrids). Iyi danho inowedzera kugadzikana uye inovimbisa hunhu hwezvakatipoteredza hwezvizvarwa zvinotevera, nekuti kusvibiswa kwemuchadenga kwakaderedzwa.
Kune yerudzi urwu rwekuvandudza tekinoroji, Valencia yagara iri epicenter. Kugamuchirwa kwemotokari dzemagetsi muValencia kunowedzera mukubudirira muhunyanzvi hwakavepo mumakore apfuura. Izvi zvinogadzira Valencia yekutanga metropolis iyo yakazvipira kugadzikana mumugwagwa traffic.
Chidimbu cheruzivo chinotsigira chiitiko ichi ndiko kucherechedzwa kweInnovation uye Guta mushumo, rakaburitswa neCentre For An Urban future (CUF) uye neWagner Innovation Labs, yeNYU Robert F. Wagner Akapedza Chikoro chePublic Service, New York , uko kuverenga kure kwemamirimita akangwara kwakagadziridzwa neGlobal Omnium, muguta reValencia, kunoratidzika seimwe yezvinhu gumi neshanu zvakakosha pasi rose, zvakaitwa mumakore apfuura.
Sezvauri kuona, kusimuka kwemotokari dzemagetsi kuri kuswedera pedyo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Green Renewables » Nyowani matekinoroji » Motokari dzemagetsi » Valencia inowana mota nyowani dzemagetsi kune ayo ngarava
United States neChina vatungamiriri chaivo musimba remhepo
Albacete ndiyo dunhu inogadzira simba rakawanda remhepo kuSpain uye yechitatu mu photovoltaic